Ihe Mere Ikwesị Ntụkwasị Obi Na-enyere Aka Operụ Ọrụ Na-aga nke Ọma | Martech Zone
Monday, November 4, 2019 Monday, November 4, 2019 RJ Horsley kwuru
Site na mbido, mmemme nkwụghachi ụgwọ ikwesị ntụkwasị obi tinyegoro ụkpụrụ ị ga-eme. Ndị ọchụnta ego, na-achọ ịkwalite okporo ụzọ ọzọ, ga-awụba ọnụ ọgụgụ ahịa ha iji hụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ewu ewu ma baa uru iji nye ha dị ka ihe mkpali na-akwụghị ụgwọ. Mgbe ahụ, ọ gawara ụlọ ahịa na-ebipụta akwụkwọ iji bipụta kaadị ntụmadị ma dị njikere ibunye ndị ahịa.
Ọ bụ atụmatụ egosipụtara nke ọma, dịka eziokwu site na eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ azụmaahịa pere mpe na ọkara (SMBs) ka na-ewere usoro kaadị obere teknụzụ a, ọ bụkwa nke a ka ị na-eme n'onwe gị nke na-adịgide n'obi ọgbọ na-esote nke mmemme iguzosi ike n'ihe dijitalụ. Nanị ihe dị iche bụ na mmemme iguzosi ike n'ihe nke dijitalụ-nke kachasị mma, ma ọ dịkarịa ala-na-enye ohere maka ọbụna nnukwu nloghachi ma na-egbutu oge na ụgwọ ndị metụtara usoro dị ala.
Ọnọdụ dị oke egwu bụ otu Susan Montero, onye nkuzi kọleji nke obere na Coral Springs, Florida, si tinye a dijitalụ iguzosi ike n'ihe omume n'ime klas ya. Ọ bụghị usoro a na-ejikarị eme ihe maka otu mmadụ ga-esi atụ anya na a ga-eji mmemme nkwụnye ụgwọ ntụkwasị obi mee ihe, mana na ọkwa mgbọrọgwụ, Montero na-echekwa otu ndị ịma aka azụmaahịa ahụ ebe niile: otu esi akpali ndị na-ege ntị ka ha gosipụta ma mezue ezubere iche. emereme. Ọ dị otu a na - eme Montero ndị na - ege ya ntị bụ ụmụ akwụkwọ karịa ndị na - azụ ahịa, ihe achọrọ ịchọrọ bụ ịtụgharị na klaasị karịa ịzụrụ.
N'ihi mgbanwe nke mmemme iguzosi ike n'ihe dijitalụ, Montero nwere ike itinye mmemme ụgwọ ọrụ ya n'ụzọ dị mfe maka mkpa ya ụfọdụ, na-amalite site na nkwupụta ụgwọ ọrụ omenala na mmejuputa ya. Site n'usoro ihe omume ya nke iguzosi ike n'ihe, ụmụ akwụkwọ na-enweta isi okwu site na igosipụta klaasị n'oge ma tụgharịa na klaasị na ma ọ bụ tupu ụbọchị eme.
Mụ akwụkwọ nwere ike ịgbapụta ihe ndị ahụ na-eguzosi ike n'ihe maka ụgwọ ọrụ, nke Montero kere site n'ụzọ dị nro. Maka isi ikwesị ntụkwasị obi ise, ụmụ akwụkwọ nwere ike inweta pensụl ma ọ bụ nchicha. Maka isi 10, ha nwere ike nweta ihe ùgwù nke ịge egwu ma ọ bụ nweta nri efu. Maka ụmụ akwụkwọ ndị chebere akara ha, ha nwere ike ị nweta akwụkwọ ịga ụlọ akwụkwọ na kredit ọzọ gafere maka akara 20 na 30, n'otu n'otu.
Nsonaazụ mmemme Montero bụ ihe pụrụ iche. Abịala jiri pasent 50 belata, tardies ejirila pasent 37 belata, na ikekwe karịa, ogo ọrụ ụmụ akwụkwọ na-atụgharị dị mma, ezi akaebe maka iguzosi ike n'ihe Montero wuru na ụmụ akwụkwọ ya. Ka ọ na-etinye ya,
Studentsmụ akwụkwọ na-arụ ọrụ zuru oke ma nwee mkpebi siri ike karị mgbe ha kwere nkwa ịkwụghachi ụgwọ ọrụ.
Ihe iji Montero (na ihe ịga nke ọma) gosipụtara bụ etu etu mmemme mmemme dijitalụ si arụ ọrụ ka ọ na-enye ndị ọrụ mgbanwe dị mkpa iji hazie ya na mkpa ha, site na igbe. Ọ bụ otu uzommeputa ahụ maka ihe ịga nke ọma enwere ike iji maka SMBs, iji nweta uru ngwaahịa ha pụrụ iche na ndị ahịa ha, nke doro anya na ya nwere nuances na quirks.
Kpọmkwem, mmemme iguzosi ike n'ihe na-enye SMBs ohere:
Mepụta omenala ụgwọ in-line with their brand na ngwaahịa onyinye
Nye ndị ahịa ha otutu ụzọ iji nweta isi okwu nke iguzosi ike n'ihe, ma ọ bụ site na ọtụtụ nleta, dollar efu, ma ọ bụ ọbụna ịkekọrịta mgbasa ozi mgbasa ozi azụmahịa
Streamline usoro nyocha na mgbapụta site na iji mbadamba iguzosi ike n'ihe ma ọ bụ ngwaọrụ POS jikọtara
Mee ihe ezubere iche mkpọsa nye ụfọdụ ndị ahịa dị iche iche, dịka ndị debara aha ha n'akwụkwọ ọhụrụ, ndị ahịa na-eme emume ncheta ọmụmụ, yana ndị ahịa dara ada nke na-agabeghị n'oge a kara aka.
Mee ka iru ha rute site na ijikọ ndi ahia ohuru site na mmemme iguzosi ike n’ihe ngwa mkpanaaka ngwa ahia
Lee nchịkọta na ndenye ego na nkwụghachi ụgwọ nke iguzosi ike n'ihe ka ha nwee ike melite mmemme ha karịa oge maka uru kachasị
Na akpaghị aka ibubata ndị iguzosi ike n'ihe omume n'ime nchekwa data ahia ha ka ha wee nwee ike iru na aha ndi ahia ha na-eto eto na mgbasa ozi ahia
Mmemme iguzosi ike n'ihe nke ọgbọ nke oge a zuru oke ma sie ike karịa usoro kaadị akwụmụgwọ oge ochie, nsonaazụ ya na-egosi ya, ma ọ bụ na kọleji dị obere ma ọ bụ SMB ọdịnala. Iji maa atụ, Pinecrest Bakery na Pinecrest, Florida, hụrụ ntụkwasị obi ha na-enweta mụbaa site na ihe karịrị $ 67,000 n'afọ mbụ nke mmejuputa atumatu oru dijitalụ ha. Azụmaahịa ezinụlọ nwere gbasaa ugbu a gaa na ọnọdụ 17 na iguzosi ike n'ihe dijitalụ ha ka bụ isi nkuku nke usoro azụmaahịa ha.
Ọtụtụ ndị ahịa anyị na-abata iri nri achịcha na kọfị maka nri ụtụtụ ma batazie n’ehihie maka mwepụta n’ehihie kama ịga leta kọfị ọzọ ma ọ bụ ụlọ ahịa kọfị. Ha nwere ekele maka ụgwọ ọrụ agbakwunyere maka iguzosi ike n'ihe ha.
Victoria Valdes, onye isi oche nkwukọrịta nke Pinecrest
Ihe omuma atu ozo di nma bu Baja Ice Cream na Fairfield, California, nke huru ego ha nwetara ruru 300% n'ime ọnwa abụọ mbụ nke mmemme ha. Obere azụmaahịa ahụ dabara na ntụpọ oge na-achọ ice cream, mana site na mmemme iguzosi ike n'ihe dijitalụ ha, ha enweela ike ịme azụmaahịa na-eto eto ma na-eto eto.
Uto anyi abiala n'elu ulo.
Analy Del Real, Onye nwe ya Baja Ice Cream
Typesdị nsonaazụ ndị a abụghị ndị ọzọ. Ha dị n'ime ala nke ohere maka SMB ebe niile. All ọ na-ewe bụ ime-ya-onwe gị mkpebi siri ike jikọtara ya na ikike nke nri digital iguzosi ike n'ihe omume imeghe ọnụ ụzọ ịga nke ọma.
Tags: Nyocha del n'ezieice creamezi ndị ahịammemme iguzosi ike n'ihe dijitalụiguzosi ike n'ihe ahịaosisi pinecrestAchịcha PinecrestSMBSusan MonteroVictoria Valdes
RJ Horsley kwuru
RJ Horsley bụ Onye isi ala nke SpotOn azụmahịa, LLC, ịkwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ na ụlọ ọrụ ngwanrọ na-akọwapụta ụlọ ọrụ ndị ahịa na-ere ahịa site na ijikọta ikike ịkwụ ụgwọ ọtụtụ ọwa na ngwanrọ ngwanrọ maka ụlọ ọrụ iji mee nke ọma ma bulie azụmahịa ha.
Mkpu: Ntughari ọdịyo na vidiyo, nsụgharị, ntinye okwu, na ndepụta okwu
Ide ederede ọdịnaya na-atọghata maka azụmahịa